Waa kuma Iftiinka Nabad iyo Nolol ? – XAMAR POST
Magaciisa oo dhameystiran waa Maxamed cabdi xayir maareeye , waa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka ah ee soomaaliya , waa nin howl kar ah shaqo badan misane aan daahlin , waana dhaqsiyaadka tiir dhaxaadka u ah dowladda dhexe iyo xukumadda Xasan Cali kheyre . Wasiir maareeye dadaal fara badan ayuu Ku bixiyay sidii uu u hor marin lahaa wasaaradda warfaafinta isaga durba magacaabistiisa wax badan oo is badal muuqda Ku sameyay wasaaradda oo kol hore isku dhex daad saneyd ,taas waxa ay keentay in madaxweyne Farmaajo uu udoorto gudoomiyaha gudiga qaban qaabadda munaasabada maalmaha xoriyadda , isaga oo si Ku dhisan aqoon iyo karti Ku wajahay shaqadaasi kuna guuleystay ,ugu dambeyntiina ay keentay In la gudonsiiyo bilad sharaf taas uu Ku mutaystay shaqada wanaagsan ee aan laheyn wax hak ran maareeye waxaa uu baahan dalka iyo dadka.
Maahan markii ugu horeyso oo lasiiyo bilad sharaf wasiirka Maxamed cabdi xayir maareeye balse horrey ayay u dhacday isaga oo shaqada iyo juhdiga uu galiyo wax qurxoon oo qof kasta qanciya uu soo bandhigo taas ay ka tarjumayso sida uu isaga ugu diyaarsan yahay wasiirka .
Wasiir .maareeye waa dheeman nuuriya shidana dowladda hadda jirta iyo kuwii horey ee uu lasoo shaqeyay ,isaga oo u ah tiir ka mida tirarka xukumad kasta ee rabta in ay guuleysato . Sawir Maareeye wa iftiin shida qolka mugdiga ah ee ubaaxan nalka .